musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Nzvimbo dzepamusoro gumi dzemahara munyika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzemahara munyika.
Sezvo hunyanzvi hwedhijitari huri kushandura nzira yatinoshanda nayo, maawa emuhofisi akajairika ave kuita chinhu chekare.
Japan ndiyo yakaipisisa nyika kune vanozvimiririra, ine Freelancer Score ye3.99/10 chete. Izvi zvinokonzerwa nekusaita zvakanaka zvakanyanya maererano nekutsvaga kwekushanda wega, kuderera kwekodzero dzepamutemo dzevashandi, uye kusaita zvakanaka paGlobal Gender Gap Index.
Singapore ndiyo nyika ine internet inokurumidza kukurumidza pa256.03 Mbps.
Iyo Netherlands ine yakanyanya kufarira kune mafreelancers ne1,305 kutsvaga kuri kuitwa pa100,000 vanhu.
Sezvo digital innovation iri kushandura mashandisiro atinoita basa, uye nguva dzemuhofisi dzakajairika dzave chinhu chekare, nyanzvi dzezvemari dzakaona nyika dzakanakisa pasi rose kuve anoshanda akasununguka.
Kuitisa chidzidzo ichi, nyika dzakapihwa zvibodzwa zvakajairwa kubva pagumi pachinhu chimwe nechimwe, kusanganisira kumhanya kwebroadband, mutengo wekurarama, simba rekodzero dzevashandi, indekisi yemufaro uye kuwanikwa kwenzvimbo dzekushandira pamwe.
10 nyika dzakanakisa kuve freelancer:
chinzvimbo Zita renyika Broadband Kumhanya Chikunguru 2021 (Mbps) Broadband Mutengo weMwedzi 2020 (USD) Kutsvaga Kushanda Kwemahara pa100,000 Statutory Rights 2019 Global Gender Gap Index 2020 Mutengo weHupenyu pamunhu, pamwedzi (USD) Co-Working Spaces pa100,000 Happiness Index 2017-2019 Freelancer Score
1 Singapowo 256.03 33.43 1,058 8 0.724 971.09 2.32 6.377 7.35
2 Nyuzirendi 164.06 62.94 554 12 0.799 944.86 2.18 7.3 7.20
3 Speini 187.88 43.43 689 5 0.795 719.37 1.58 6.401 6.53
4 Ositireriya 85.32 59.25 964 11 0.731 974.16 1.95 7.223 6.49
5 Dhenimaki 208.5 52.02 558 8 0.782 1,094.99 1.08 7.646 6.48
6 Kanadha 174.53 76.14 649 9 0.772 889.2 1.56 7.232 6.45
7 Siwizarendi 214.82 69.37 672 6 0.779 1,586.17 2.50 7.56 6.36
8 Rituaniya 132.18 13.35 599 6 0.745 617.42 1.64 6.215 6.35
9 Siwidheni 163.31 48.4 379 7 0.82 953.14 1.23 7.363 6.34
10 Ayarendi 116.19 48.55 616 7 0.798 979.52 1.71 7.094 6.27
Singapowo anotora nzvimbo yepamusoro senzvimbo yakanakisa yekushanda seanoshandira akasununguka muna 2021, aine zvibodzwa 7.35. Singapore inobatsira kubva kubroadband iyo inokwanisika ($33.43 pamwedzi) uye yakanyanya kukurumidza (256.03 Mbps). Nyika inoita zvine simba mukati mebhodhi, kunyangwe isiri iyo yakachipa nzvimbo yekugara uye pachine nzvimbo yekuvandudza maererano neiyo Happiness Index mamakisi.
edwin ndugire anoti:
Gunyana 28, 2021 pa 09: 07
Ndisanganiseiwo nechikuva chenyu chekunyora nyaya. Ndiri munyori wechinyorwa ane hunyanzvi ane makore matatu echiitiko ane top-notch girama isina plagiarism.